कक्षा ११को नतिजा भर्खरै प्रकाशित [नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गरौँ] अरुका लागि सेयर गरौँ - Taja Khabar
काठमाडौ । कक्षा ११ को नतिजा भर्खरै प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, सानोठिमीले २०७५ सालको परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरेको हो । बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरेर नतिजा प्रकाशन भएको जानकारी गराएको छ । बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार नियमिततर्फ तीन लाख ३२ हजार आठ सय ९१, अक्षराङ्कन पद्धतीमो आंशिकतर्फ एक लाख ७६ हजार ४९ र अंक प्रणालीमा ४९ हजार पाँच सय पाँच विद्यार्थीले परीक्षामा सहभागि भएका थिए । परीक्षा फारम भरेका मध्ये २० हजार अनुपस्थित भएका थिए ।
नियमिततर्फ जिपिए ३.६५ देखि ४ सम्म ल्याउने एक हजार एक सय १५ विद्यार्थी छन् । जिपिए ३ देखि ३.६० ल्याउने आठ हजार नौ सय ४९, जिपिए २.८१ देखि जिपिए ३.२० ल्याउने २४ हजार पाँच सय १५ विद्यार्थी छन् । त्यसैगरी २.४१ देखि २.८० ल्याउने ४८ हजार सात सय ३१, जिपिए २.१ देखि २.४० ल्याउने ८६ हजार सात सय ७०, जिपिए १.६१ देखि २ ल्याउने ९२ हजार पाँच सय ९३ रहेका छन् । जिपिए १.२१ देखि १.६० ल्याउने ४१ हजार चार सय ६, जिपिए ०.८१ देखि १.२० ल्याउने आठ हजार एक सय २७ र जिपिए ० देखि ०.८० ल्याउने २० हजार ६ सय ८५ रहेका छन् । अंकाङ्कन पद्धतीमा परीक्षा दिएका आंशिक विद्यार्थीमध्ये ३८.४१ प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् । कक्षा ११ को परीक्षा गत ९ जेठमा सम्पन्न भएको थियो ।
यो पटक बिगतका बर्ष भन्दा निकै छिटो गरि नतिजा सार्बजनिक गरिएको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा यसै साता सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेर आइतबारदेखि नै काम अगाडी बढाएको थियो । परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माका अनुसार नतिजा प्रकाशनका लागि आवश्यक यो पटक अलिक चाँडै काम गर्न सकिएको जनाइएको छ । यो पटक ५ लाख ४८ हजारले कक्षा ११ को परीक्षाका लागि फाराम भरेका थिए । कक्षा ११ को परीक्षा गत वैशाख ३० गतेदेखि जेठ ९ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । विगतका वर्षमा परीक्षा वैशाख जेठमै सञ्चालन भएपनि नतिजा भने पुस वा माघमा मात्रै सार्वजनिक हुने गरेको थियो । यस पटक पनि नतिजा विषयगतरुपमा ग्रेडिङमा सार्वजनिक भएको छ । नतिजा हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
यदि यहा Coming Soon !!! भनेको खण्डमा नतिजा हेर्न मोबाइलको मेसेज बक्समा गई Type NEBSYMBOL and send SMS to 35001 मा एसएमएस गर्न सकिनेछ ।
यस बर्षको कक्षा ११ र १२ को वार्षिक कार्यतालिका यस्तो
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा ११ र १२ को भर्नादेखि परीक्षा र नतिजा प्रकाशनसम्मको वार्षिक कार्यतालिका बनाएको छ । बोर्डले पहिलोपटक भर्नादेखि परीक्षाफल सार्वजनिक गर्ने बेलासम्मको कार्यतालिका तय गरेको हो । मुलुकभरका शिक्षण संस्थामा एकरूपता कायम गर्न र कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न कार्यतालिका तोकिएको जानकारी बोर्डका सदस्यसचिव दुर्गाप्रसाद अर्यालले दिए ।
कक्षा ११ मा भर्ना भएका विद्यार्थीलाई भदौ मसान्तभित्र रजिस्ट्रेसन फाराम वितरण सुरु गरेर असोज २१ भित्र संकलन गरिसक्ने उल्लेख छ । पुस १५ देखि माघ १५ भित्र कक्षा ११ र १२ को नियमित, आंशिक र ग्रेडवृद्धि परीक्षार्थीको परीक्षा आवेदन फाराम भरिसक्नुपर्नेछ । कार्यतालिकाअनुसार वैशाख र जेठमा सञ्चालन हुने दुवै कक्षाको परीक्षा तालिका माघ मसान्तसम्म प्रकाशित गरेर परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरिसक्नुपर्नेछ ।
कक्षा १२ को प्रयोगात्मक परीक्षा चैत मसान्त र कक्षा ११ को वैशाख १५ भित्र सम्पन्न गरी प्राप्तांक बोर्डको कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्ने अर्यालले जनाए । बोर्डले बाह्य निरीक्षक नपठाउने विषयको भने विद्यालयले प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गरी चैत मसान्तभित्र प्राप्तांक पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षा वैशाख दोस्रो सातादेखि र ११ को अन्तिम सातादेखि सुरु हुनेछ । ग्रेडवृद्धि परीक्षा १२ कक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको ३५ र कक्षा ११ को ४५ दिनभित्र हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ । त्यस्तै कक्षा १२ को नतिजा प्रकाशन प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा साउन मसान्तभित्र र ११ कक्षाको असोज मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ ।
कक्षा ११ नतिजा कसरी हेर्ने अनि Download र Print गर्ने तरिका
कक्षा ११ को नियमित तर्फको नतिजा बोर्डले एसइइकै जस्तै नौ समूहमा विभाजन गरेर नतिजा सार्वजनिक गर्नेछ । बोर्डले कक्षा १० को एसइइ परीक्षाकै जस्तै कक्षा ११ को नतिजा पनि नौ ग्रेडमा विभाजन गरेर सार्वजनिक गरेको छ । तर, एसइइ परीक्षामा समग्र ग्रेड दिने गरिएपनि कक्षा ११ को नतिजा भने हरेक विषयको छुट्टाछुट्टै विषयगत ग्रेड दिइएको छ । विद्यार्थीहरुले कुन विषयमा कुन ग्रेड आयो भन्ने मात्रै थाहा पाउने भएका छन् । ११ को परीक्षामा विद्यार्थीको विषयगत रुपमा ग्रेड छुट्टयाइए पनि एकमुष्ट नतिजामा यस्तो ग्रेड दिइएको छैन ।
९० देखि एक सयसम्म ल्याउनेको बिषय ग्रे ए प्लस हुन्छ। त्यस्तै ८० देखि ८९ सम्म ल्याउनेको ए, ७० देखि ७९ अंक ल्याउनेको बी प्लस, ६० देखि ६९ सम्मको बी, ५० देखि ५९ अंक ल्याउनेको सी प्लस, ४० देखि ४९ सम्म अंक ल्याउनेको सी, ३० देखि ३९ सम्मको डी प्लस, २० देखि २९ अंक ल्याउनेको डी र ० देखि १९ अंक आउने विषयको ग्रेड इ लेखिएको हुन्छ। विद्यार्थीले कुनै एक विषयमा डी प्लस वा डि भन्दा कम ग्रेड ल्याएको रहेछ भने ग्रेड वृद्धि मौका परीक्षामा सहभागी हुन पाउने बोर्ड अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणी पौडेलले जानकारी दिए ।
नतिजा कसरी हेर्ने अनि Download र Print गर्ने त ?
परीक्षाको नतिजा http://hseb.ntc.net.np/ मा हेर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ । त्यहाँ अाफ्नाे सिम्बाेल नम्बर र जन्ममिति हाल्नुहाेस र ईन्टर थच्नुहाेस् । त्यसपछि मार्कसिट देखाउँछ । त्यसलाई किबाेर्डकाे सहायताले Ctrl सँगै A थिच्नुहाेस् । र Ctrl सँगै C थिच्नुहाेस् । अब त्यसलाई word documnet मा लगेर Ctrl सँगै V थिच्नुहाेस् । अब त्यसलाई मज्जाले सेभ गर्नुस वा Print गर्न पनि सक्नु हुनेछ । नतिजा हेर्न मोबाइलको मेसेज बक्समा गई Type NEBSYMBOL and send SMS to 35001 मा एसएमएस गर्न सकिनेछ ।
कति अंकको कुन ग्रेड ?
९० भन्दामाथि अंक ल्याउनेको ए प्लस,८० देखि ८९ सम्म ए, ७० देखि ७९ सम्म बि प्लस, ६० देखि ६९ सम्मको बी, ५० देखि ५९ ल्याउनेको सी प्लस, ४० देखि ४९ सम्मल्याउनेको सी, ३० देखि ३९ सम्मको डी प्लस, २० देखि २९ ल्याउनेको डी, ० देखि १९ ल्याउनेको इ ग्रेड
थाहापाउनुहोस ,कस्तो होला यसपाली दशैको मौसम ? मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको अनुमान हेर्नुहोस !
यी रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने तितेकरेला खानु बिष बराबर हो, जानकारी लिनुस पुरा हेर्नुस==>>
चीनमा एकै समय देखियो ३ वटा सूर्य, सुन्दर र दूर्लभ दृश्य देखेर वैज्ञानिक पनि…